Ilaina ny fiaraha-miasa amin’ny olombelona
“Fa izay rehetra miantso ny anaran’ny Tompo no hovonjena. Hataony ahoana ary no fiantso izay tsy ninoany? Ary hataony ahoana no fino izay olona tsy reny? Ary hataony ahoana no fandre, raha tsy misy mpitory?” Rom. 10:13,14
Nanome fanatitra mahagaga ho an’ny olombelona Andriamanitra, sy hery lehibe hitakiana ny olombelona ao anatin’ny tsy fankatoavana sy ota ho amin’ny fahitsiana sy fankatoavana; fa naseho ahy fa tsy manao na inona na inona Izy raha tsy misy fiaraha-miasa avy amin’ny olombelona. Nomena mamimaim-poana ny fahasoavana rehetra, ary nomena koa ny hery manosika mahery vaika hanaitra sy hihazona toe-tsaina tia manao asa fitoriana ho velona ao am-pon’ny olona, mba hitambatra ny herin’Andriamanitra sy ny herin’olombelona (...)
Inona no nampiasanao ny fanomezana avy amin’Andriamanitra? Nanome hery manosika izay hahafahany mitoetra ao am-ponao Izy, ka ho afaka hanandratra an’i Jesosy Kristy voahombo, amim-paharetana sy fanantenana ary amim-pitandremana mandrakariva ianao, ho afaka hanome fampitandremana fa ho avy indray amin-kery sy voninahitra lehibe i Kristy ary hitaona ny olona rehetra hibebaka (...)
Ahoana ny fiasan’ny Fanahy Masina tao am-ponao? Noho ny tanjaka avy amin’ny Fanahy Masina, dia fohazina ianao hampiasa ireo talenta nomen’Andriamanitra anao, izay tokony hampiasain’ireo lehilahy sy vehivavy ary tanora hitory ny fahamarinana ankehitriny, hanao ezaka manokana, hamonjy ireo tanan-dehibe izay tsy mbola tratran’ny fahamarinana , ary koa hanandratra ny faneva. Amin’ny fitahiana narotsak’Andriamanitra taminao, miasa mavitrika ve ireo tanjaka nomena anao? Nanohina lalina kokoa ny fanahinao ve ny fahamarinana, ary ny fahatsapana sy ny fifandraisan(izany lehibe amin’ny fanahy very sy lavitra an’i Kristy? Vavolombelon’i Kristy miavaka sy feno fanapahan-kevitra kokoa ve ianao taorian’ny fahatsapana miharihary ny fitahian’Andriamanitra anao.
Ny asan’ny Fanahy Masina dia ny mametraka tanteraka ao an-tsainao ireo fahamarinana lehibe sy goavana. Tokony hofonosina ao anaty lamba sy halevina anaty tany ve izany fanomezana manokana izany? Tsy dia tsia, tokony homena ny mpanjana-bola; ary rehefa mampiasa izany talenta izany ny olona, na dia bitika aza izany, dia raisin’ny Fanahy Masina ireo zavatra momba an’Andriamanitra dia hasehony indray amin’ny saina. Ataony ho lasa fitaovana mamelombelona ny Teny natao an-tsirambina teo aloha. Amin’ny alalan’ny Fanahy dia velona sy mahery ao an-tsain’ny olona izany, tsy noho ny fahakingan-tsaina na herin’ny fahalalan’ny olona, fa noho ny herin’Andriamanitra miasa amin’ny olona, ary ho an’Andriamanitra ihany ny voninahitra.